တရုတ်နိုင်ငံမှ Porsche Android Car Dvd, Porsche Android 5.1 Car Dvd, Porsche Android 5.1.1 Car Dvd
ဖေါ်ပြချက်:Porsche Android Car DVD,Porsche Android 5.1 Car Dvd,Porsche Android 5.1.1 Car Dvd,Porsche Android 4.4 Car Dvd,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Porsche Android Car DVD
Porsche Android Car DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Porsche Android Car DVD, Porsche Android 5.1 Car Dvd ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Porsche Android 5.1.1 Car Dvd R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Cayenne 2010 အတွက်စိတ်ကြိုက်ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2006-2010 အတွက် GPS နှင့်အတူကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne ၂၀၁၀ အော်တိုရေဒီယိုအသံ Headunit  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne Android 7.1 Car DVD Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Porsche အမျိုးအစားများအတွက် Car Auto DVD ကစားစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne CAR အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PORSCHE Cayenne Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2006 ဘို့ကားတစ်စီးအညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2003-2010 ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2003 ဘို့ကားတစ်စီးအညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2006 အဘို့အမာလ်တီမီဒီယာကားတစ်စီးဟာ android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Porsche Cayenne အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 20102din မာလ်တီမီဒီယာ system ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Porsche Cayenne များအတွက် Android မှာ 7.1 ကားတစ်စီး DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2003-2010 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Porsche ကားတစ်စီးဟာ android system ကို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2003-2010 များအတွက် dash ကားတစ်စီး DVD player ထဲမှာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cayenne 2010 အတွက်စိတ်ကြိုက်ကားစတီရီယို
ထုပ်ပိုး: 27.5 * 25.5 * 20CM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
Cayenne 2003 - 2010 အတွက်စိတ်ကြိုက်ကားစတီရီယို ၁။ Android 9.0 ဆိုတာကိုရေတွက်ရမယ့်အင်အားတစ်ခု။ စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်မှုကြောင့်၎င်းသည်လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၈ လက်မမျက်နှာပြင်တွင်သင့်ဖုန်းကို Mirror လုပ်ပါ။ Android...
Cayenne 2006-2010 အတွက် GPS နှင့်အတူကားရေဒီယို
ထုပ်ပိုး: 53cm * 38cm * 22.5cm
Supply နိုင်ခြင်း: 350000pcs/year
Cayenne 2006-2010 အတွက် GPS နှင့်အတူကားရေဒီယို Cayenne အတွက် gps ပါသောဒီယူနစ်ကားရေဒီယိုသည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး android ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်အများစုကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ CanBus Decoder ပါသော Cayenne 2006-2010...
Cayenne ၂၀၁၀ အော်တိုရေဒီယိုအသံ Headunit
Cayenne ၂၀၁၀ အော်တိုရေဒီယိုအသံ Headunit 1. Cayenne 2010 Auto Radio Audio Headunit သည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပါတယ် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုလိုဂို၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Cayenne 2010 Auto Radio...
Cayenne Android 7.1 Car DVD Player
ထုပ်ပိုး: 400 * 255 * 210MM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
Cayenne Android 7.1 Car DVD Player ဤမော်ဒယ်အတွက် CAR မျက်နှာပြင် HD ရေဒီယို Player ဖြင့် cayenne အတွက် Car DVD Player ။ cae dvd ရေဒီယိုဖွင့်စက်၏ sensitivity setting သည်မြင့်မားပြီးအသံတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ စားပွဲပေါ်မှာမရှင်းလင်းပေ။ သို့သော်...
Porsche အမျိုးအစားများအတွက် Car Auto DVD ကစားစက်
Supply နိုင်ခြင်း: 350000 sets per year
Porsche အမျိုးအစားများအတွက် Car Auto DVD ကစားစက် ၁ ။ OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပါတယ် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုလိုဂို၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Porsche အမျိုးအစား Android ကား DVD အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏...
Cayenne CAR အတွက် Android ကား DVD player
Cayenne CAR အတွက် Android ကား DVD player ဒီမော်ဒယ်အတွက် CAR မျက်နှာပြင် HD ရေဒီယို Player ဖြင့် Cayenne အတွက် Car DVD Player ။ cae dvd ရေဒီယိုဖွင့်စက်၏ sensitivity setting သည်မြင့်မားပြီးအသံတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ စားပွဲပေါ်မှာမရှင်းလင်းပေ။...
PORSCHE Cayenne Android ကား DVD player
Supply နိုင်ခြင်း: 300000 pcs/year
အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များလည်ပတ်ရန်အတွက်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးမြန်ဆန်သောမြန်နှုန်း။ ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊...
Cayenne 2006 ဘို့ကားတစ်စီးအညွှန်း
Supply နိုင်ခြင်း: 350000 per year
Cayenne 2006 ဘို့ကို Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 1.Compatible: လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, Cayenne 2006 အဘို့ဤ 7...
Cayenne 2003-2010 ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD GPS
ထုပ်ပိုး: 27.5 * 25.5 * 20CM / ဆုကြေးဇူးကိုသေတ္တာ
Cayenne 2003-2010 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD GPS 1. ကို Android 8.0 Oreo, CPU ကို: Octa-Core, 4GB RAM ကို & 32GB ROM ကို, အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယို IC: NXP TEF6686, ကောင်းသောရေဒီယိုဧည့်ခံခဲ့သည်။ OBD အမှား codes...
Cayenne 2003 ဘို့ကားတစ်စီးအညွှန်း
Cayenne 2003 ဘို့ကို Android 8.1 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ 1.This Prosche Cayenne 2003 မှာ Android ကားကို DVD Player ကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်: သင်ဟာအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သော free.You များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic...
Cayenne 2006 အဘို့အမာလ်တီမီဒီယာကားတစ်စီးဟာ android
Cayenne 2006 ဘို့ကို Android 8.1 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ 1. : လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, Porsche Cayenne...
Porsche Cayenne အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
ထုပ်ပိုး: 3.6KGS / 400 * 255 * 210MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
Porsche Cayenne အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို android ဖုန်းနှင့် wince ကားကို DVD Player ကိုအပါအဝင် 1.Porsche Cayenne အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Cayenne 20102din မာလ်တီမီဒီယာ system ကို
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 340 * 255 * 235MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
Cayenne 20102din မာလ်တီမီဒီယာ system ကို PX5, Octa-Core 1.6 GHz မြန်နှုန်း: ငါတို့သည် Cayenne 2010 အတွက်သုံး 1.The system ကိုအန်းဒရွိုက် 6.0.1, CPU ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Flash ကို: 32G ။ resolution: * 600 1024 ။...
Porsche Cayenne များအတွက် Android မှာ 7.1 ကားတစ်စီး DVD player
ထုပ်ပိုး: 6KGS / 360 * 260 * 330MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
Supply နိုင်ခြင်း: 350000 pieces/year
Porsche Cayenne များအတွက် Android မှာ 7.1 ကားတစ်စီး DVD player 1.We အကြောင်းကိုသန်း 20 ရောင်းချကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းစျေးကွက်အားဖြင့်သက်သေပြနေသည်စသည်တို့ကိုကားတစ်စီး DVD player / ကားတစ်စီးရေဒီယို / ကားတစ်စီး GPS navigation...
Cayenne 2003-2010 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 27.5 * 25.5 * 20CM / ဆုကြေးဇူးကိုသေတ္တာ 4Sets / CTN 14.8KGS / CTN 54 * 30 ရက် * 45CM / CTN Set
Supply နိုင်ခြင်း: 350,000pcs/year
Cayenne 2003-2010 များအတွက် Android မှာ 7.1 ကားကို DVD Player ကို သင့်ရဲ့ Porsche Cayenne 2003-2010 ဘို့ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန် လက်လှမ်းနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ် applications များ, ဂိမ်းများ, ရုပ်ရှင်များ, နှင့်ပိုပြီးသင်ပေး - က၎င်း၏က Android 7.1.1...
Porsche ကားတစ်စီးဟာ android system ကို DVD player
ထုပ်ပိုး: 400 * 255 * 210MM / ဆုကြေးဇူးကိုသေတ္တာ
Porsche ကားတစ်စီးဟာ android system ကို DVD player 1. Porsche ကားတစ်စီးအဘို့ဤပုံစံသည်ယခုအခါအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ Porsche ကားတစ်စီးကို...
Cayenne 2003-2010 များအတွက် dash ကားတစ်စီး DVD player ထဲမှာ
Cayenne 2003-2010 များအတွက် dash ကားတစ်စီး DVD player အတွက် Android ကို 8.0 PX5 navigation အွန်လိုင်း, အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံသုံးပြီးသို့မဟုတ်မြေပုံကဒ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာ Google Maps ကို, Waze...
တရုတ်နိုင်ငံ Porsche Android Car DVD ပေးသွင်း
Porsche Android Car DVD Player
၁။ Porsche အတွက်ကား GPS player ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ဂီတ၏အနက်နှင့်လေထုသည်တိကျပြီးနူးညံ့သည့်မျှတမှုရှိခြင်းကြောင့်သင့်အားကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုရရှိစေရန်ကောင်းမွန်သောဂီတနှင့်နူးညံ့သောအလှတရားကိုပြသပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်၊ သိပ်သည်းဆ၊ သတင်းအချက်အလက်တို့၏အသံပမာဏကိုရရှိရန်အတွက်သာယာသောအလွန်ကောင်းမွန်သောဂန္ထဝင်ကျက်သရေနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဂီတသည်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အနေအထားဆိုင်ရာသဘောသဘာဝကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောဂီတကိုခံစားနိုင်ရန်အပြင်ဂီတထဲ၌သဘာဝကိုပါ ၀ င်ခွင့်ပြုရန်၊ ဂီတအတွေးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုနက်ရှိုင်းစွာသိမြင်ခြင်းဖြင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရစ်သမ်သည် Porsche အတွက် Car radio နှင့်အတူတက်ခြင်းမှ ၀ မ်းမြောက်ခြင်း၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။
၂။ Bulit-in WIFI ဟော့စပေါ့များမျှဝေခြင်း - အင်တာနက်ကို browser လုပ်ရန်၊ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်၊ သင်၏မေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ဂိမ်းကစားရန်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံများနှင့်အတူသွားလာရန်ပင်လျှင်လွယ်ကူပြီးအဆင်မပြေသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှု။ အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံများ နှင့်ထိရောက်မှု။ ဖြေ - Google မြေပုံ၊ IGO၊ Sygic နဲ့ Waze မြေပုံစတဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံတွေကိုသင်အလကားရရှိနိုင်တယ်။ ဂူဂဲလ်မြေပုံဖြင့်သင်သည်အတိကျဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းများ၊ တိုက်ရိုက်ယာဉ်အသွားအလာအချက်အလက်နှင့်အခြားအရာများကိုရနိုင်သည်။ သင်၏လမ်းကိုရှာခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမြန်။ မလွယ်ကူပါ။
၃။ လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပါ။ android စမတ်ဖုန်းနှင့်ကိရိယာများနှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့်လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်ထားသောအင်္ဂါရပ်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ကား၏ခေါင်းစီးကိုအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကို USB မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်၍ ထပ်တူပြုနိုင်သည်။ အပိုဆော့ဖ်ဝဲမလိုအပ်ပါ။
Land Cruiser ဟာ FJ များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD
Ibiza 2018 ဘို့အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD
အသစ်က Clio ကို Android 9.0 ကားတစ်စီး DVD
2018 VIOS ကားတစ်စီးအညွှန်း
Corolla သည်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD
TENNA အသစ်ဟာ android ကားတစ်စီးအညွှန်း
Camry 2018 ဘို့အန်းဒရွိုက်ကားကိုဖျော်ဖြေရေး
Hilux 2016-2018 များအတွက်ကားအသစ် DVD
Porsche Android Car DVD Porsche Android 5.1 Car Dvd Porsche Android 5.1.1 Car Dvd Porsche Android 4.4 Car Dvd Android9Car DVD
မူပိုင်ခွင့်© 2020 SHEN ZHEN KLYDE ELECTRONICS CO., LTD All rights reserved ။